TAG ထားတယ်ဗျို့: December 2008
ကျွန်တော့်ကို နေ့အိပ်မက်က စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းအကြောင်းကို TAG ထားလေရဲ့..
တစ်ပတ်အတွင်း ရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လေ... တော်ကြာမရေးရင် နေ့အိပ်မက်ကနေ
(အိပ်မက် မက်ရင် နိုးတ၀က်နဲ့ အိပ်ရေးမ၀လို့လေ..ဟိဟိ)
စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှာ ဖြစ်နိုင်တာနဲ့ မဖြစ်နိုင်တာဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့
ကျွန်တော်ကတော့ ခံယူမိတယ်.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က စိတ်ကူးယဉ်တာကို
ငယ်ငယ်ကတည်းက အကျင့်တစ်ခုလို မွေးလာခဲ့ပြီး ယခုအချိန်ထိလည်း စိတ်ကူးယဉ်မှုအား ထက်သန်နေတုန်းပါ.. ကျွန်တော် စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းတွေထဲက မဖြစ်နိုင်တာ သိပေမယ့်
ဖြစ်ချင်တဲ့ ရူးသွပ်ခြင်းလေးကို ချရေးလိုက်ပြီဗျာ..
ငှက်တစ်ကောင်ဖြစ်ချင်တယ်..ရဲဝံ့တဲ့ ငှက်တစ်ကောင်အဖြစ်ပါ.. လိုရာပျံသန်းရင်း
အတားအဆီးမဲ့စွာပေ့ါ .. ကိုယ့်ရဲ့ခြေချောင်းတွေမှာလည်း ခွန်အားတွေအပြည့်နဲ့
မြဲမြံစွာ ကုတ်နိုင်တဲ့ အင်အားတွေလည်း ရှိရမယ်.. မိုင်ထောင်ချီဝေးတဲ့ ခရီးတွေကိုလည်း ပျံသန်းနိုင်ရမယ်..စသည်ဖြင့်ပေါ့.. အဲလိုပဲ ငှက်ဖြစ်ရင်တောင် အဲလိုငှက်ဖြစ်ချင်တာ..
ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ ဆန္ဒကတော့ အေးမြတဲ့ သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်မှာ လုံခြုံပြီး နားနေဖို့ အဆင်ပြေတဲ့
နေရာကို လိုချင်တယ်.. တစ်ကောင်တည်းပဲ နေချင်တယ်.. ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ အပေါင်း အဖေါ်တစ်သိုက်တော့ ရှိရမယ်.. ကိုယ်ခိုလှုံရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကပဲ ဆယ့်နှစ်ရာသီ စားသုံးလို့
ရမယ့် သစ်သီး အရွက်တွေ အဖူးအပွင့်တွေ ဖြစ်ထွန်းစေချင်တယ်.. ပတ်ဝန်းကျင်
အပေါင်းအသင်း တွေကလည်း လိုအပ်ရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က စားလို့ရမယ့် အစားအစာတွေကို
လောက်ငှစွာ စားသုံးလို့ ရရမယ်.. အနီးအနားမှာလည်း စမ်းချောင်းငယ်လေး
စီးဆင်းနေရမယ်.. ရေမှာ ပျော်မြူးတတ်တဲ့ ငါးလေးတွေကို သူတို့ အန္တရာယ်ကင်းအောင်
စောင့်ရှောက်သလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း စမ်းရေအေးရဲ့ ကန့်သတ်နေရာလေးမှာ
အတောင်အလက်တွေကို ဆေးကြာမယ်.. သောက်သုံးလို့ရမယ့်အခြမ်းမှာ
သောက်သုံးမယ်.. စိမ်းလန်းတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးသာယာတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ရမယ် ..
နားနားနေနေ နေပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ညည်းငွေ့လာရင် မိုင်ချီဝေးတဲ့
နေရာသစ်ကို ပျံသန်းသွားမယ်..လမ်းမှာခရီးသွားတွေနဲ့ တွေ့ရင် အတူတူ ခရီးဆက်ကြမယ်..
သူ့တို့ရဲ့ အထုပ်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့ ခြေထောက်အစုံနဲ့ ကုတ်ယူပြီး လိုရာခရီးကို အဖေါ်ပြု
သယ်ဆောင်ပေးမယ်.. လမ်းခရီးကြမ်းတွေ ရေစီးအားသန်တဲ့ ချောင်းတွေကို
ဖြတ်ကျော်ရမယ်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ သန်မာတဲ့ ခြေအစုံနဲ့ပဲ မြဲမြံစွာ ကုတ်ယူ သယ်ဆောင်ပေးမယ်..
ချောမွေ့တဲ့ နေရာရောက်တဲ့ အထိပေ့ါ.. အန္တရာယ်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း
ကိုယ့်ရဲ့ထက်မြက်တဲ့ နှုတ်သီးနဲ့တွေနဲ့ ထိုးဆိတ်မယ်.. ခြေအစုံနဲ့ တိုက်ခိုက်မယ်..
အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ.. ခရီးသွားဖေါ်တွေ ရောက်လိုတဲ့ နေရာကို
ရောက်လို့ ခရီးတစ်ထောက်နားပြီး ကိုယ်လိုရာကို ဆက်ပျံသန်းမယ်..
လူတွေစကား နားလည်သလို လူတွေနားလည်အောင် ပြန်ပြောတတ်တော့
ခရီးသွားနေတဲ့ အတောအတွင်းမှာ သူတို့နဲ့ ပြောဆို ဆွေးနွေးရင်း ဗဟုသုတ
အတွေးအခေါ်တွေ သင်ခန်းစာတွေလည်း မှတ်ယူမယ်..ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့
အားအင်နဲ့ မိုးမြင့်မှာ ပျံသန်းနေရင်း ကမ္ဘာမြေပြင်မှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ လူတွေ
အဆောက်အဦးတွေ.. စသည်ဖြင့် အကုန်လိုက်ကြည့်မယ်..
ရှု့ထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ လိုက်ကြည့်လို့ လေဟုန်စီးရင်း ပျံဝဲနေမယ်..ပူအိုက်တဲ့
ရာသီတွေမှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အတောင်ရိုက်ချက်တွေနဲ့ အားလုံးကို လေပြည်အေးတွေ
တိုက်ခတ်ပေးမယ်.. ရောက်တဲ့ အရပ်မှာလည်း မိတ်ဆွေအချို့ ဖွဲ့မယ်..
သူတို့ဆီကိုလည်း ကူးချီသန်းချီနဲ့ လိုအပ်တာတွေကို ဖလှယ်ကြမယ်..
အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်တဲ့ ဘက်က
တစ်ချို့ကို ဖြည့်စွမ်းပေးမယ်.. အိုမင်း မစွမ်းလို့ ပျံသန်းဖို့ အင်အားတွေ ကုန်ခမ်းနေရင်တောင်
တစ်ချိန်တစ်ခါက ကိုယ့်ရဲ့ အတောင်ရိုက်ချက်ရဲ့ လေအဟုန်ကို သစ္စာပြုခဲ့မယ်..
နောင်ပေါက်လာမယ့် ငှက်ကလေးတွေကိုလည်း သင်ခန်းစာတွေ ပေးခဲ့မယ်..
ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ သီိအိုရီကိုလည်း ကမ္ဘာတစ်ခွင်မှာ လှိုင်းအဖြစ် ထားရှိခဲ့မယ်..
စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကို စာတိုအနေနဲ့ ရေးသားလိုက်ပါတယ်..
တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကြောင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်သလို
လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်တဲ့ အခါ ဖြစ်မလာရင် စိတ်ညစ်တာလေးတွေ
ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ.. ကိုယ်တွေးတာလေးတွေ ဖြစ်ချင်တာလေးတွေကို စိတ်ကူးယဉ်တိုင်း
ဖြစ်တယ် ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေအနေနဲ့ လက်တွေ့ဘ၀တွင်
စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းတွေနဲ့ ကွာဟတတ်တာမို့.. ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာလေးကို ထည့်သွင်း
ရေးသားဖေါ်ပြရင်း နေ့အိပ်မက်နှင့် ဘလောခ့်မောင်နှမများ အားလုံးလည်း
နားလည်ဖတ်ရှုရင်း စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှ လက်တွေ့အနာဂတ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့
ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါ ဒီမျှသာမို့ ..။
အစိမ်းရောင်မြင်တိုင်း ဒေါ်လာငွေတွေကိုမြင်ယောင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒေါ်လာတွေရတာနဲ့ မြန်မာငွေနဲ့လဲပြိး အကြွေးတွေဆပ်ဖို့အိမ်ကိုပို့လိုက်ရယင် မေမေတို့ပျော်လိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့...... အစိမ်းရောင်မြင်တိုင်းဒေါ်လာတွေကိုပိုင်ချင်တယ် (ခပ်များများပေါ့ အနည်းဆုံးဆွဇ်ဘဏ်ကအကောင့်န်တစ်ခုလောက်ပါပဲ)။ အနီရောင်မြင်တိုင်းပတ္တမြားငမောက်တွေကိုမြင်ယောင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြည်တန်ပတ္တမြားဆိုတာ ပုံပြင်တွေမှာသာကြားဖူးတာပေမယ့် တော်တော်အဖိုးထိုက်ဆိုပဲ............ သိပ်များများမဟုတ်တောင် တစ်ပြည်လောက်ရယင် ကမ္ဘာ့ကျောက်မျက်ဈေးကွက်မှာရောင်း........ရတဲ့ငွေတွေကို မြန်မာငွေနဲ့လဲပြီး မြန်မာပြည်က ဆွေမျိုးညာတိတွေကို မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီပေးကမ်းလိုက်ရယင် တော်တော်ဒါနမြောက်ပြီး ပီတိဂွမ်းဆီထိသွားမယ့်ကိစ္စပေပဲမဟုတ်လား.........။ အပြာရောင်မြင်တိုင်း နီလာပြာတွေကို သိပ်စိတ်ကူးယဉ်မိတယ်...........နေ့သင့်နံသင့်ကျောက်ဖြစ်လို့ဝမ်းဆက်တစ်ဆင်စာ ကမ္ဘာမှာမပေါ်ဘူးသေးတဲ့ဒီဇိုင်းလှလှလေးနဲ့ကိုယ်ကိုဆင်ယင်လိုက်ချင်တယ်.......
အဖြူရောင်မြင်တိုင်း စိန်ရတီခပ်ကြီးကြီးနဲ့ ဗြိတိန်ဘုရင်မသရဖူလို သရဖူမျိုး ..............ဟောလိဝုဒ်စတား တွေရဲ့မင်္ဂလာလက်စွပ် မင်္ဂလာသတို့သမီးရဲ့စိန်စီတဲ့ဂါဝန်တို့လို လှပမက်မောစရာကောင်းတဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးတပွဲလောက်တော့ ဆင်နွှဲချင်တယ်လို့ အိပ်မက်တိမ်တိုက်တွေကြားမှာ မက်ခဲ့တာအခုဆိုအတော်ကြာရော့မယ်...........။အခုနေ မှော်ဝင်ကော်ဇောတစ်ချပ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုယင် မေမေတို့ရှိတဲ့နေရာကို အခုကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာကနေ စိတ်ထဲသတိရတဲ့အချိန်တိုင်း ခဏချင်းကော်ဇောပျံလေးစီးပြီးအရောက်သွားချင်လိုက်တာ......ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မေမေတိှု့ရှိတဲ့နေရာက ဂျီတော့လို့အသံမကြားကော်နက်ကအခါတိုင်းကျမို့လို့ ဖုန်းဆက်ဖို့ကလဲ ဈေးအကြီးဆုံးစံချိန်ဝင် မြို့တော်ဖြစ်နေတာမို့ ကော်ဇောပျံလေးနဲ့သာဆို စိတ်ကတတိုင်း ရောက်နိုင်မယ်ဆိုဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ........။ ဒီမှာအစားအသောက်အဆင်မပြေတိုင်း မေမေ့လက်ရာလေးတွေကိုဂျီတိုက်စားဖို့အတွက်ရောပေါ့.........။အရာအားလုံးကို ကိုယ်ထင်သလို အပိုင်စားရနိုင်မယ်ဆိုယင်...............ဆွေဝေးမျိုးဝေး မိဝေးဖဝေးဘဝက အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီး မိသားစုတွေပျော်ရွှင်ချမ်းသာကျန်းမာစွာနဲ့နေချင်တယ်..........။အမြဲတမ်းစိတ်ကူးယဉ်မိတာကတော့ ကိုယ်ချစ်ရသူတွေနဲ့ ဝမ်းနည်းခြင်းမရှိတဲ့အဆုံးမရှိပျော်ရွှင်မှုကိုပေါ့..။ထာဝရပါ................။
ကျွန်မကို စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ပြောတဲ့ ကိုဝင်းဇော် ကို ဒီစာစုလေးနဲ့ခင်မင်မှုသက်သေထူလိုက်ပါပြီနော်.........
ထပ်ပြီး ကျွန်မကနေပြီးတော့ ခင်မင်ရသူစာရေးဖော်တွေဖြစ်တဲ့...........
အချစ်ဆိုသည်မှာတဲ့ ကိုရုပ်ရင့်ကြီး အော်..မှားလို့... ကိုရဲရင့်နီ တက်ဂ်ထားတာပါ။ တက်ဂ်ကြွေးတွေ မကြေသေးတော့ စိတ်ထဲမှာလည်း ပို့စ်အသစ်တင်ဖို့ မရဲပါဘူး.. အဟဲ..ဆင်ခြေပေးနေတာ..တကယ်တော့ လုံးဝကို မအားတာပါနော်။ အဲဒီ ( အချစ်ဆိုသည်မှာ ) ကို မက်မက်ရဲ့ အဒေါ် တီတီဒွင်းက ရေးပေးထား ပြီးပါပြီ။ :P ဒါပေမယ့် ထပ်တက်ဂ်တယ် ဆိုတော့လည်း ထပ်ရေးပေးပါမယ်။ အမယ်..ရေးပေးမယ်ဒါ ပြောတာ သူတို့တွေ ရေးထားတာတွေက တော်တော်လေး ပြည့်စုံနေတော့ မက်မက်တို့ ဖတ်ရတာနဲ့တင် ရေးစရာ မကျန်တော့ဘူး...အဟဲ...အချစ်ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ ဆိုတော့ လူတိုင်းလူတိုင်း သိစိတ်က မသိပေမဲ့ မသိစိတ်က သိနေတဲ့အရာပါ...အဟဲ..နဲနဲမြင့် သွားလား မသိဘူးနော်...... အဟိ ...အချစ်ဆိုတာ မတူညီတဲ့ လူနှစ်ဦးက တူညီအောင် ညှိပြီး အချစ်ပေါ် အချစ်ဆင့်ကာ မိသားစုဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်၊ လူမှုအတိုင်းအ၀ိုင်း ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ မျိုးဆက်တွေ ပွားပြီးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်
သူ+သူမ+အချစ်+လက်ထပ်ခြင်း=သားသမီးရတနာ သူ+သူမ+အချစ်+လက်ထပ်ခြင်း+သားသမီးရတနာ=မိသားစု သူ+သူမ+အချစ်+လက်ထပ်ခြင်း+သားသမီးရတနာ+မိသားစု=ပြသနာ
ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာတာပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ တဏှာဖက် မနွယ်တဲ့ အချစ်သည်သာ အေးမြတာပါ။ အချစ်ကြောင့် စွဲလမ်းမှု ဥပါဒါန် တွေ ဖြစ်ပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေကင်းတဲ့ ဖြူစင်တဲ့ အချစ်သည်သာ အေးမြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ များများချစ်ရင် များများခံစားရပြီး နဲနဲပဲချစ်ရင် နဲနဲပဲခံစား ရတာပါ၊ အချစ်ကြီးလို့ အမျက်ကြီးသွားတဲ့ ဘုရားရှင် လက်ထက်က အကြောင်းလေးကို ပြောပြပါ့မယ်နော်။
ဘုရားရှင် လက်ထပ်က ၀ိနောဓ ဆိုတဲ့ဘုရင်တစ်ပါး ရှိပါတယ်။ သူ့မှာ အရမ်းချောမော လှပတဲ့ ဆန္ဒရလင်္ကာ ဆိုတဲ့ ကချေသည် ရှိပါတယ်။ သူမဟာဘယ်လောက်ထိချောလဲဆိုရင် ဘုရင် အပါအ၀င် စစ်သူကြီး သူဌေးကြီး တွေကပါ သူမရဲ့ ဆိုဟန်၊ ကဟန်တွေနဲ့ သူမရဲ့ ရူပါကို စွဲမက်တမ်းတ နေရတာပါ။ နိုင်ငံရဲ့ အလှဂုဏ်ဆောင် ဘုရင့်ကို ဖြော်ဖြေကပြရတဲ့ ကချေသည် ဆိုတော့ တော်ရုံချောတာ မဟုတ်ဘူးနော် ။အလွန်တရာမှ ချောမော လှပတာပါတဲ့။
ဒါကြောင့်လည်း ဘုရင်က သူမကို အနားမရှိ၊ တံခါးမရှိ၊ ဓားမထိတဲ့ ဆုတံဆိပ် ချီးမြှင့်ထားပါတယ်။ (တရုတ်ကားထဲက ပေါင်ချိန်ကို ဘုရင်က ရတနာကျောက်စီဓား ဆုပေးထားသလိုမျိုးပေါ့) နန်းတွင်းထဲကို ၀င်ချင်တိုင်းဝင် ၊ ထွက်ချင်တိုင်း ထွက်နိုင်တဲ့ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မှ တားပိုင်ခွင့် မရှိတဲ့ ဆုပါ။ အပြစ်ရှိ ခဲ့ရင်တောင် ဘုရင့်လက်နက်နဲ့ မထိရ မသေရတဲ့ ဆုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ဘုရင်က သရက်တော ဥယျာဉ်က သူကိုးကွယ်တဲ့ အရိယာ ရဟန္တာ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အရှင်ကောဏ္ဍည ဆိုတဲ့ ရဟန်းတော်ကို နန်းတွင်းထဲခေါ်ပြီး တရားနာပါတယ်။ တရားနာ တဲ့အခါ သမာဓိ ပျက်မှာစိုးလို့ နန်းတွင်းဆောင်ထဲ မည်သူမှ မ၀င်စေရလို့ မှာထားပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အလှပဂေး ဆန္ဒရလင်္ကာလေး ရောက်လာပါတယ်။ နန်းဆောင်ထဲ ၀င်မယ်လုပ်တော့ တံခါးစောင့် ဗိုလ်မှုးလေးက တားမြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဆန္ဒရလင်္ကာလေးက သူ့ကိုတားရ ကောင်းလားဆိုပြီး အမျက်တော်ရှကာ ဘုရင်ပေးထားတဲ့ တခါးမရှိ ဓားမထိတဲ့ ဆုကို ထုတ်ပြကာ သူ့ကို ဘယ်သူမှ တားခွင့်မရှိကြောင်း ရန်တွေ့တာပေါ့။ ဒါကိုဘုရင်က ကြားတော့ သူမကို ၀င်လာဖို့ ခေါင်းညိတ် ပြလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ဆန္ဒရလင်္ကာ လေးက၀င်လာပြီး ဘုရင့်အနားမှာ ၀င်ထိုင်ပါတယ်။ ၀တ်ကောင်းစား လှတွေနဲ့ တောက်ပြောင်နေတော့ သူမ၀င်လာတာကို အရှင်ကောဏ္ဍည ကလည်းမြင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဆန္ဒရလင်္ကာလေး ကတော့ ရဟန္တာ ကိုမြင်ပြီး အင်မတန် အေးချမ်းတဲ့ ရဟန်းရှင်ရဲ့ မျက်နှာတော်နဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ မျက်ဝန်းတော်ကို တွေ့လိုက်ရတော့ အဲဒီရဟန်းကို ချစ်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ စွဲလမ်းစိတ်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်ချင် စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ တဏှာကုန်ပြီး ပပဉ္စ တရားသုံးပါး (ဒိဋ္ဌိ၊ တဏှာ၊ မာန) တွေမရှိတဲ့ ရဟန္တာအရှင်မြတ် ကတော့ အေးဆေး တည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲ တရားဆက်လက် ဟောပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်နေ့မှာ ဆန္ဒလင်္ကာလေးက ရဟန္တာ သီတင်းသုံးရာ သရက်တော ဥယျာဉ်တော်ကို ရောက်ရှိ လာပါတယ်။ ပြီးတော့ မထေရ်ရဲ့ ခြေတော်အစုံကို သူမဆံပင်နဲ့ ပတ်ကာ ၀ပ်ဆင်းပြီး အရှင်ဘုရား တပည့်တော်မကို အရှင့်ရဲ့ အပါးမှာ တဖ၀ါးမကွာ ပါရမီဖြည့်ခွင့် ပေးပါဘုရားတဲ့...ဒီတော့ အရှင်ကောဏ္ဍညက အကျွန်ုပ်မှာ ပြုစုလုပ် ကျွေးရန် ကပ္ပိယ ရှိတယ် ဒကာမ ၊ ကျွန်ုပ်အတွက် ဘာမှမလိုပါ လို့ ပြောတာပေါ့။ ဒီတော့ ကချေသည်လေးဟာ သရက်တော ဥယျာဉ်ကျောင်းကို နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း လာပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ရဟန္တာ ကလည်း တံခါးကို ပိတ်ကာ အတွေ့မခံတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆန္ဒရလင်္ကာက အနုပီယ သရက်တော ဥယျာဉ်ကို သွားမြဲသွားပြီး ရဟန္တာရဲ့ မျက်နှာလေးကို တွေ့ရနိုး တွေ့ရနိုးနဲ့ တံခါး အပြင်ကနေပဲ နေ့တိုင်း စောင့်နေ ပါတယ်တဲ့။
ကြိုက်မရှက်၊ ငိုက်မရှက်၊ ငတ်မရှက် ဆိုတဲ့အရှက်သုံးပါး ဖြစ်နေတော့ ကျန်းမာရေး တွေလည်းထိခိုက် လာပါတယ်။ ကကြိုးကကွက် တွေကလည်း မမှန်ဖြစ် နေတာပေါ့၊ ဒါကိုသိနေတဲ့ ဒုတိယ ကချေသည်မလေး ကုန္ဓရကေသာ ဆိုသူကလည်း ကုန်းချောဖို့ ချောင်းနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရင်ဆီကို သွားလျှောက်တင်ပါတယ်။ သရက်ကိုင်းလေးကို ကိုင်ပြီး အရှင်မင်းကြီး ဒီသရက်ကိုင်းက ဆန္ဒရလင်္ကာရ လေးရဲ့ရထားလုံး ပေါ်ကရရှိတာပါ၊ ဆန္ဒရလင်္ကာလေးဟာ သရက်တောဥယျာဉ် ကျောင်းလေးကို နေ့တိုင်းသွားကြောင်း၊ အရှင်ကောဏ္ဍညနဲ့ ဆန္ဒရလင်္ကာလေးတို့ ဖောက်ပြားနေကြောင်း ကုန်းချောပါတယ်။ ဒါကိုဘုရင်က မှူးမတ်တွေကို သွားစုံစမ်း စေပါတယ်။ မှူးမတ်တွေကလည်း ဆန္ဒရလင်္ကာလေးက မထေရ်ကြီးကို သူနဲ့ပေါင်းဖော်စေ လိုကြောင်းနဲ့ နေ့တိုင်း သရက်တော ဥယျာဉ်ကျောင်းရဲ့ အပြင်မှာ ရဟန်းကို မြင်ရရုံနှင့် ကျေနပ်ကာ စောင့်နေကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘုရင်က စဉ်းစားပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရဟန္တာမထေရ်နဲ့ ကချေသည်တို့ ညားတယ်ဆိုတာ ပြောမကောင်း ဖြစ်မဲ့အစား၊ ငါကိုယ်တော်ပဲ အနစ်နာခံပြီး သာသနာကို အဖတ်ဆယ်ရမယ်၊အမျိုးမြင့်တဲ့ဘုရင်နဲ့ ဇာတ်နိမ်တဲ့ ကချေသည်တို့ ဖြစ်တာက ငါတို့ပုထုဇဉ် တွေအတွက် ကိစ္စမရှိ ဒါကြောင့် သာသနာမှာ အပြောမခံရအောင် ငါကိုယ်တော်မြတ် ဆန္ဒရလင်္ကာလေးကို မိဖုရားခေါင် မြှောက်မှ သင့်တော်ပေမယ်။ ဒါဆို ဒုတိယ ကချေသည်လေး ကုန္ဓရကေသာလည်း ပထမ ကချေသည်လေး နေရာရသွားမယ်။ ဆန္ဒရလင်္ကာလေးလည်း မိဖုရားခေါင် ဖြစ်သွားမယ်။ ကဲ....ရှင်ဘုရင်နဲ့ ကချေသည် အဆင့်က ကွာခြားနေတာနော်....ဒါကိုတောင် မထောက်ထားပဲ သာသနာကို ထိခိုက်လာမှာကို မလိုလားလို့ အနစ်နာခံတဲ့ စိတ်လေးက ဘယ်လောက် မြင့်မြတ်လည်းနော်။
ဒီလိုနဲ့ မှုးမတ်တွေ ခေါ်ပြီး ရှင်ဘုရင်ကြီးက ကချေသည် မလေးရဲ့ အဆောင်ကို ကြွပါတယ်။ အရှင်မင်းကြီး ကြွလာတယ်၊ မကြွစဖူး ကြွလာတာ ဘာကိစ္စ များလဲပေါ့ ဆန္ဒရလင်္ကာရက မေးပါတယ်။ ဘုရင်ကလည်း မသိချင် ဟန်ဆောင်ပြီး နှမတော် ကျန်းမာရဲ့လား၊ နှမတော်ကျန်းမာရေး ကောင်းအောင်နေပါ၊ ကျန်းမာရေးကောင်းရင် နှမတော်ကို မိဖုရား မြှောက်ချင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ သဘောတူရဲ့လား လို့မေးပါတယ်။ ဆန္ဒရလင်္ကာလေး ကလည်း သဘောတူကြောင်း ပြောပါတယ်။
အရှင်မင်းကြီး နှမတော် အရမ်းကြောက် နေပါတယ်။ ဘာကြောင့် ကြောက်ရတာလဲ၊ ငါကိုယ်တော် မြတ်လောက် သင်နှမမှာ ကြောက်ရမဲ့သူ ဘယ်သူရှိလို့လဲ မေးပါတယ်။ ဆန္ဒရလင်္ကာ လေးကလည်း ဘုရင်ချီးမြှောက်တဲ့ ဖိဖုရား ရာထူးကို ယူတဲ့နေ့မှာ အဲဒီလူရဲ့ ခေါင်းကိုဖြတ်ပေးပါလို့ ကတိတောင်းပါတယ်။ဘုရင်ကလည်း နှမတော်လက်ညိုးသာ ထိုးလိုက် နှမတော်အလိုကျ ဖြစ်စေရမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။တကယ်တော့ ဆန္ဒရလင်္ကာလေးက ချစ်တာကို မိန်းမမာယာ ဖြင့်ကြောက်တယ်လို့ ဖြေလိုက်တာပါ၊ သူမရတော့မဲ့ အတူတူ ရဟန္တာရဲ့ ခေါင်းကိုဖြတ်ဖို့ ကြံစည်နေတာပါ။
ဒီလိုနဲ့ ဆန္ဒရလင်္ကာလေး နေကောင်းလာတော့ မိဖုရား မြှောက်တဲ့နေ့မှာ ဆန္ဒရလင်္ကာက အရှင်မင်းကြီး နှမတော်ကို ကတိပေးထားတာ နှမတော်ကြောက်တဲ့ နှမတော်၏ ရန်သူရဲ့ကို ခေါင်းဖြတ်ပေး ပါတော့လို့ ပြောပါတယ်။ ဘုရင်က မေးပါတယ်၊ နှမတော်ပြောပါ နှမတော်ရဲ့ ရန်သူက ဘယ်သူလဲပေါ့။ အဲဒီမှာ သူမရဲ့ ရန်သူဟာ ရှင်ကောဏ္ဍည ရဟန္တာ ဖြစ်တယ်လည်း ဆိုရော ဘုရင်က အံသြတာပေါ့။ အရှင်ကောဏ္ဍည ရဟန္တာရဲ့ ခေါင်းကိုမရရင် အရှင်ဟာ တိုင်းပြည်အုပ်ချူပ် မင်းလုပ်ပြီး ကတိကို မထိန်းသိမ်း သစ္စာတရား မရှိတဲ့ ဘုရင်ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး အပြစ် တင်တာပေါ့။ ဒါနဲ့ ဘုရင်ကလည်း အကြိမ်ကြိမ် ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေပါတယ်။မိန်းမလိုချင် လို့တော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဘုရင်ရဲ့ ရာဇပဝေဏီ ထွက်ပြီးသား ကတိစကားကို ထိန်းနေတော့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေတာပါ။
ဒီလိုနဲ့ နန်းတွင်းမှာ အခြေအတင် ပဋ္ဋိပက္ခ ဖြစ်နေတုန်း ဒါတွေကို ရဟန္တာမြတ်က ဥာဏ်နဲ့ဆင်ခြင် လိုက်တော့ အော်..ငါ့ရဲ့အာယုဒီဂ သက်တမ်းက သိပ်မကျန် တော့ဘူးဆိုတာ သိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဘိဥာန်နဲ့ နန်းတွင်းကို ကြွလာပါတယ်။ ဒကာရေမြေ့ရှင် ဆရာတော်ရဲ့ သက်တမ်းက မရှိတော့ပါဘူး၊ ငါကိုယ်တော်၏ ခေါင်းကိုဖြတ်ရင် အရှင်မင်းကြီးလည်း ကတိမပျက် တော့ဘူး၊ ဆန္ဒရလင်္ကလဲ သူရဲ့ရန်သူ မရှိရင် သူအေးအေး ချမ်းချမ်း နေလုိ့ရမယ်၊ ဒါကြောင့် ငါကိုယ်တော်မြတ်၏ ခေါင်းကိုဖြတ်ပါ၊ ငါလှူပါတယ် လို့ပြောပါတယ်။ ဘုရင်ရဲ့ စိတ်မှာလည်း တော်တော် တုန်လှုပ်သွားပါတယ်။ ဆန္ဒရလင်္ကာ လေးကလည်း အရှင်ဖြတ်ပါတော့ လို့ပြောပါတယ်၊ ဘုရင်ကလည်း ချီတုံချတုံဖြစ်ပြီး နှစ်ကြိမ်လုံးလုံး သန်လျက်ကို ထုတ်လိုက် သွင်းလိုက်နဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။ သုံးကြိမ်မြောက်လည်း ကျရော ဆန္ဒရလင်္ကာလေး အမြင်မှန်ရသွားပါတယ်။
အော်..တကယ်တော့ လူတိုင်းလူတိုင်း ငါက ငါလိုချင်စိတ် တစ်ခုထဲနဲ့ ဒီရဟန်းကို ငါမှမရရင် တခြားလူလည်း မရစေရဘူး၊ ငါမှ မချစ်ရရင် တခြားမိန်းမလည်း မချစ်ရဘူး ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ တကယ်တော့ ရဟန်းက တခြားမိန်းမကို ချစ်ဖို့ပေါင်းဖို့မှ မဟုတ်ပဲ၊ ငါနဲ့ ဘုရင့်အတွက် အဆင်ပြေစေအောင် လာပြီး အသက်စွန့်တယ်၊ လူတွေဟာ ငါဆိုတဲ့ အတ္တ တစ်ခုတွက် အလုပ်လုပ်တယ်၊ အရှင်ကောဏ္ဍည ကတော့ အတ္တကိုစွန့်၍ ငါတို့အတွက် လာပေးဆပ်တယ်၊ ဘာကြောင့်မို့ သူဒီလို လုပ်နိုင်တာလဲ၊ ပါရမီရင့် နေတာပါနော်၊ တကယ်တော့ ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးကို ချစ်တာပါလား၊ ယောင်္ကျားကောင်း တို့ရဲ့ချစ်တဲ့ အချစ်က ဒါကိုခေါ်တာလား မသိပါဘူးဆိုပြီး စဉ်းစားတာပေါ့၊ လင်ချစ်မယားချစ် စိတ်ကနေ လောကကြီးကို စွန့်လွတ်တတ်တဲ့ အချစ်ကို သူဘယ်လို ကျင့်ခဲ့လည်း မသိဘူး အဲဒီလို အချစ်မျိုးကို ဘယ်လိုပိုင်နိုင် အောင်ခဲ့လည်း စဉ်းစားပါတယ်။ ငါသိချင် လိုက်တာလို့ တွေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီအခါမှာ ဘုရင်ကလည်း သုံးကြိမ်မြောက် သန်လျက်နဲ့ အရှင်ကောဏ္ဍည ရဟန္တာရဲ့ ဦးခေါင်းကို ရွယ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ဆန္ဒရလင်္ကာလေးက အရှင်မင်းကြီး တော်ပြီ အရှင်ကောဏ္ဍည မထေရ်ရဲ့ခေါင်းကို မဖြတ်ပါနဲ့တော့။ အရှင်ကောဏ္ဍည ကလည်း နှမတော်ရဲ့ ရန်သူမဟုတ် တော့ပါဘူးဆိုပြီး တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ အရှင်ကေဏ္ဍည ရဟန္တာက အခြားတစ်ယောက်ကို ချစ်ဖို့ပေါင်းဖို့ မဟုတ်ဘူးနော်၊ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်မတို့ နှစ်ယောက်အတွက် ဦးခေါင်းကို စွန့်လွတ်ရဲတာက အရှင်ဘုရားရဲ့ စိတ်သန္တာန်မှာ ဘာတွေရှိပါသနည်း လို့မေးပါတယ်။ အရှင်ကောဏ္ဍညက နှမ ငါ၏စိတ် သန္တာန်မှာ ဓမ္မတွေ ရှိပါတယ်လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။ နှမ ဆန္ဒရလင်္ကာ အရိယာတွေသည် ဥာဏ်မှာ စံကြပါတယ်၊ ပုတုဇဉ်တွေသည် ကံမှာ စံကြပါတယ်။
ပုတုဇဉ်တွေက ကံတိုးအောင်နေသည်၊ အရိယာတွေက ဥာဏ်တိုးအောင်နေသည်၊ ကံတိုးရင် ခန္ဓာတိုးတယ်၊ (ကံတိုးတယ်ဆိုတာ သံသရာချဲ့တဲ့ သဘောပါ။) အရိယာတို့သည် ကံတွေကုန်သွားတာ ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ငါ့မှာ အကုသိုလ်ရော ကုသိုလ်ရော ကုန်သွားပါပြီ၊ မရှိတော့ပါ၊ နှမရဲ့ စိတ်သန္တာန်မှာတော့ အရိယာဓမ္မ မဟုတ်တဲ့ အဓမ္မ တွေရှိတယ်၊ အဲဒီတရားတွေက နှမရဲ့ စိတ်သန္တာန်ကို ပူလောင်အောင် ဆင်းရဲအောင် လုပ်နေတာပါ၊ ဒါကြောင့် ရဟန်းကို ရဟန်းမှန်း မသိဘဲ ဖြစ်နေတာပါ။ တကယ်တော့ ဖြတ်ရမဲ့ ဦးခေါင်းက အပြင်မှာ မရှိပါဘူး၊ နှမရဲ့ စိတ်သန္တာန်မှာ ရှိတဲ့ အ၀ိဇ္ဇာနဲ့ တဏှာ ကိုသာပြတ်အောင် ဖြတ်ရမှာပါ။ အဲဒီတရား တွေဖြစ်တဲ့ အ၀ိဇ္ဇာတွေသည် နှမရဲ့ ရင်ထဲ၌သာ ရှိပါတယ်၊ ငါ့ရဲ့ ဦးခေါင်း မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒီ နှမရင်ထဲ မှာရှိတဲ့ အ၀ိဇ္ဇာ တဏှာဆိုတဲ့ ဦးခေါင်းကို ဖြတ်နိုင်ရင် အလိုလိုပြတ်ပြီး သွားမှာပါ နှမရယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ အရှင်ကောဏ္ဍည ရဲ့သာယာ တည်ငြိမ်စွာ နှမလို့ခေါ်ဆိုမှုနဲ့ တရားသံတွေကြောင့် ဆန္ဒရလင်္ကာလေးမှာ ရှိနေတဲ့ ဒေါသဟာ အလိုလို ပြာကျသွားပါတယ်။
ပြီးတော့ မထေရ်ရဲ့ ခြေတော်အစုံကို သူမဦးခေါင်းနဲ့ ဆံပင်နဲ့ပတ်ပြီး ရှိသမျှ အပြစ်တွေကို ၀န်ချ တောင်းပန်ပါတယ်၊ ပထမတစ်ခါ အရှင်ကောဏ္ဍညရဲ့ ခြေတော်ကို ၀ပ်ဆင်းတဲ့ အကြိမ်နဲ့ မတူတော့ပါဘူး အခုတော့ အမြင်မှန် ရခဲ့ပြီး အသိတရား ရသွားတဲ့အတွက် အရှင်ဘုရား စံမြန်းတဲ့ အရိယာ စံအိမ်မှာ တပည့်တော်မ နေချင်ပါသည်၊ အရှင်ဘုရားတို့ ကျင့်သုံးတဲ့ အရိယာတွေရဲ့ ဓမ္မတွေကို ကျင့်သုံး ချင်ပါသည်၊ အရှင်ဘုရားတို့ ဖြတ်တောက်ခဲ့တဲ့ အ၀ိဇ္ဇာ တဏှာတို့ကို တပည့်တော်မ ဖြတ်တောက် ချင်ပါသည်လို့ အရှင်ကောဏ္ဍည မထေရ်ကြီးကို လျှောက်ထားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရှင်ကောဏ္ဍည မထေရ်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကြောင့် အရှင်ကောဏ္ဍည မထေရ်ရဲ့ နောက်ကို လိုက်ပြီး တရားကျင့်ကြံ တဲ့အတွက် နောက်ဆုံး ရဟန္တာ ထေရ်ရီမ ကြီးဖြစ်သွား ပါတယ်နော်။
အခြေခံကတော့ တဏှာကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အကြောင်းကို အရင်းခံထား တာပါ။အချစ်ကြီးတော့ အမျက်ကြီးသွားတဲ့ ဆန္ဒရလင်္ကာလေးကို ရေးလိုက်ရတာက အချစ်ဆိုသည်မှာ ပိုစ့်လေးကို ရေးဖို့စဉ်းစား နေစဉ်မှာ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောသလ္လ (ဦးကော) ရဲ့တရားတော်ကို နာကြားမိတာနဲ့ စိတ်ကူးလေးရလို့ ဘုန်းဘုန်း ဦးကောရဲ့ တရားတွေကို ပြန်လည် ရေးသား ပေးလိုက်တာပါ၊
ဒါကြောင့် ကိလေသာ အကုသိုလ်တရား နဲ့ တဏှာဖက် မနွယ်တဲ့ အချစ်နဲ့ ချစ်တတ်နိုင်ကြ စေရန်ဆန္ဒ ပြုလိုက်ပါတယ်။
အစအဆုံး ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုရဲရင့်နီလည်း ကျေနပ်နိုင် လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ တက်ဂ်တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ။
အကို ဟန်သစ်ငြိမ်နဲ့ ယုန်ကလေးတို့က အချစ်အကြောင်း tag လိုက်ကြတော့ ရေးရအုံးမှာပေါ့လေ။ အချစ်အကြောင်းကို သီးသန့်မရေးရတာလည်း ကြာပြီးဆိုပါတော့။ ဟိုအရင်တုန်းက ကိုအောင်မျိုးဟန် tag လို့ အချစ်အကြောင်း ခေါင်းစဉ်နဲ့ တစ်ခါရေးပြီးသွားပါပြီး။ အဲဒီမှာ အချစ်မျိုးစုံအကြောင်းပါပေမယ့် ကျနော်ဒီပိုစ့်မှာတော့ ကျနော်တို့ လူသားတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကျနော်တို့အဆို ၁၅၀၀ အချစ်အကြောင်းကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လူသားတွေအားလို့ အချစ်နဲ့မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေအသက်ဆက်ရှင်နေသရွေ့တော့ အချစ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေ ရေးနေ ပြောနေရအုံးမှာပဲလေ။
အချစ်ဆိုသည်မှာ ထူးအိမ်သင်ဆိုထားသလိုပဲ အံ့သြမှုများနဲ့ ဆန်းကြယ်သောအရာ ပဲလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ကျနော့်ထင်မြင်ချက် ကတော့ အချစ်ဆိုတာ ဖန်တီးယူလို့မရတဲ့ သူ့ဘာသာသူပေါက်ဖွားလာတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတစ်ရပ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ကျနော်ဘာလို့ အဲလိုထင် မြင်မိသလဲဆိုတာကို သက်သေနဲ့တကွ ရှင်းပြပါ့မယ်။
အချစ်နဲ့ပက်သက်လို့ ကျနော့်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့။ စိတ်ဝင်စားတယ်မလား??? ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လေ :P ။
ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုဗျ . . . .
ကျနော်နဲ့ အတန်သင့်ရည်းနှီးတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကောင်မလေးက ချောလည်းချောတယ် ချစ်စရာလည်း အရမ်းကောင်းတယ်။ ရုပ်ရည်က ယောကျာ်းလေးတွေ တော်တော်များများကြိုက်တဲ့ရုပ်မျိုးပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျနော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ချို့က ကျနော်နဲ့ အဲဒီကောင်မလေးကို စနောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျနော့်အတွက်လည်း အဲဒီကောင်မလေးကို လိုက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သူ့ဖုန်းနံပါတ်လည်း ကျနော်ရထားတယ် ပြီးတော့ သူနဲ့လည်း စကားပြောဆိုလို့ အဆင်ပြေနေတယ် (ချစ်စကားကြိုက်စကား မဟုတ်ဘူးနော်) နောက်ပြီး သူ့အိမ်ကိုသွားလည်နိုင်ဖို့ သူ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်း ကျနော်ရင်းနှီးနေပြန်တယ်။ အဲဒါတွေအပြင် ကျနော်သူ့ကို ချစ်စကားကြိုက်စကားပြောဖို့ အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးမယ့်သူတွေလည်း ရှိတယ်ဗျာ။
ကဲ့အဲဒီတော့ ကျနော့်အတွက် ဘယ်လောက်အဆင်ပြေလဲဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးက ကျနော့်ကို ပြန်ချစ်ကြိုက်မယ်ဆိုတာတော့ သူ့အပေါ်မှာ မူတည်တယ်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျနော့်ဘက်က ကောင်မလေး ကျနော့်ကို ပြန်ချစ်ကြိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမှာပေါ့။
ကျနော့် ဦးနှောက်က ကြိုးစားဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပေမယ့် ကျနော်နှလုံးသားက တက်တက်ကြွကြွလက်မခံချင်ဘူး။ ကျနော် ကောင်မလေးကို ချစ်ဖို့ ဖန်တီးချင်ပေမယ့် ကျနော့်စိတ်က လက်မခံဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ သေချာတယ် ကျနော်သူ့ကို မချစ်ဘူး ဆိုတာ။ အဲဒီတော့ ကျနော်သိလိုက်တယ် အချစ်ဆိုတာ ဖန်တီးယူလို့မရတာပဲ။
ကျနော်တစ်ကယ်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေးကျတော့ ကျနော်စိတ်က အလိုလိုနေရင်းနဲ့ ပြောင်းလဲလာတယ်။ စိတ်အပြင် ကျနော့်ရဲ့လှုပ်ရှားဆက်ဆံမှုတွေပါ ကျနော်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေးအပေါ်မှာ ပြောင်းလဲလာတယ်။ ဒါတွေကို ကျနော်လုပ်ယူတာမဟုတ်ဘူး သူ့ဘာသာသူဖြစ်သွားတာ။ ဥပမာဗျာ သူ့ကိုတွေ့ရင် ကျနော်နှလုံးခုန်သံတွေက ပုံမှန်ထက်မြန်လာသလို သူ့ကိုတွေ့ချင်စိတ်တွေ အလိုလိုနေရင်းနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် အချစ်ဆိုတာ သူ့ဘာသာသူ ပေါက်ဖွားလာတယ်လို့ ကျနော်လက်ခံလာတယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော်လက်ခံထားတဲ့ အချစ်ဆိုသည်မှာ ဖန်တီးယူလို့မရတဲ့ သူ့ဘာသာသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ခံစားမှု တစ်ရပ်လို့ ကျနော်သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။
အချစ်ကြောင့် ပျော်ရွှင်ကြတာတွေရှိသလို အချစ်ကြောင့်ပူဆွေးရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကျနော်ချစ်တဲ့ ဘလောဂ်ဂါ မောင်နှမများအားလုံး အချစ်ကြောင့်ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ။
ကိုဟန်သစ်ငြိမ်နဲ့ ယုန်ကလေးတို့ရေ ကျနော်ခံယူထားတဲ့ အချစ်ဆိုသည်မှာကို ရေးလိုက်ပါပြီးဗျို့။ ပြီးတော့ တော်တော်များများလည်း ရေးပြီးနေကြတော့ ဆက်မ tag တော့ပါဘူး . . .။ အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ . . .
ကျွန်တော့်ညီမလေးက တော်တော်ချစ်ပုံရတယ်.....
အချစ်မရှိတဲ့လူကို အချစ်အကြောင်းလာရေးခိုင်းတယ်...... ကျွန်တော်လည်းမသ်ိသလောက် မတတ်သလောက်
ကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ် ...... .ညီမလေး ပုလဲရေ အကိုလည်း မသိတာတွေကို မမှန်သလိုရေးလိုက်ပါတယ် ....
မခေါ်ပဲနဲ့ ရောက်လာတယ်.......နှုတ်မဆက်ပဲနဲ့ ပြန်သွားတယ်....ဒါပေမဲ့.....သူထားခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေက
အလွမ်းသင်ခန်းစာတွေလေ.......ဒီသင်ခန်းစာ ကိုဖြေရှင်းဖို့ လူတွေအတွက်တော့ ရင်ထဲမှာ ရခဲ့တဲ့
အလွမ်းဒဏ်ရာကို သက်သာအောင် အရင်ကြိုးစားရမယ်လေ...........ဟုတ်တယ်ဟုတ်..........
အဲ.ဒါနဲ့.......စကားမစပ်.........ညီမလေးရေ အကို မသိတာတွေကို မမှန်သလို ရေးပြီ.................ကဲ...
ရွာသားရေ.........အချစ်ခန်းလေးကို ဖွင့်လိုက်ကြရအောင်.............အကို အမ များ ဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ..........
အချစ်ဆိုသည်မှာ................နူးညံ့တဲ့ ပန်းကလေးတွေနဲ့တူတယ်.........ပန်းကလေးတွေဟာ ဆက်လက်ရှင်
သန်ဖို့အတွက် အမြဲတမ်း ဂရုစိုက် ပေးရတယ်..........ပန်းကလေးတွေလို အချစ်ဟာလည်း ရှင်သန်မှုရပ်သွားရင်
သေသွားတတ်ပါတယ်........အချစ်ဆိုတာက လူသေသွားမှသာ အချစ်ကသေဆုံး သွားမှာလေ...........
အချစ်ဆိုသည်မှာ..............ကလေးတစ်ယောက်က ငရုတ်သီးကို စားချင်တယ်.....သူစားရင် စတ်မယ်ဆိုတာ
ပူမယ်ဆိုတာ သိတယ်........သိသိကြီးနဲ့စားချင်နေတာလေ......ဖြစ်လာမဲ့ ရလဒ်တွေကို သူခံစားနိုင်တယ်ပေါ့.....
အဲလိုပဲ အချစ်ဟာလည်း ပူလောင်မယ်ဆိုတာ သိတယ်..........သိသိကြီးနဲ့ဝင်တိုးတာလေ.........
အဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲ သိလား.......သူ့မှာခံနိုင်ရည်ရှိလို့ နေမှာပေါ့နော်.........ကျွန်တော်ဆိုလည်း ဒီလိုပဲ လုပ်မှာပဲ......
အချစ်ဆိုသည်မှာ ............."စိတ်ထဲကတော့ ချစ်ပါတယ်" "ပါးစပ် ကတော့ ဘာမှမပြောဘူး" .........
အဲလိုမျိုးလူတွေလဲရှိနေတာပဲ ......... အများကြီးပဲ........ အဲဒီထဲမှာ ....... .ကျွန်တော်လည်းပါတယ်..........
မီးတောက်ထင်တာကတော့ အဲသလို မလုပ်ရဘူးထင်တယ် ........ သူတို့သိအောင်လုပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်.....
ဘယ်လောက်အသက်ကြီးကြီး အချစ်ဆိုတဲ့ အမူအရာကို ပြဖို့လိုတယ်လေ........မင်းလေးကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့
စကာလုံးပြောဖို့လိုတယ်လေ .......... အဲ.ဒါပေမယ့် ........... ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း ........... လေးနက်စစ်မှန်တဲ့
အချစ်ဆိုသည်မှာ...........ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ငါးဖမ်းဖူးသလိုပါပဲ........ရွံ့ထဲမှာဆိုရင် ငြိမ်နေတယ်......
လိုက်လည်း ဖမ်းရော ထွက်ပြေးသွားတယ်.....အချစ်ဆိုတာလည်း ....ဒီအတိုင်းပဲ.........ရပ်နေရင် ကောင်းတယ်...
ထလည်းသွားရော ထွက်ပြေးသွားတယ်........လို့ ထင်ပါတယ်..........
အချစ်ဆိုသည်မှာ...........အကို ၊ အမ များမှာ ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လူတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်.........အသည်းကွဲခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာကို
လည်း ခံစားဖူးပါလိမ့်မယ်........ဘာဖြစ်လို့လဲမေးရင်တော့............ဒီဒဏ်ရာက်ို မကြောက်လို့ လုပ်တာပေါ့.......
ဟုတ်တယ်ဟုတ်.......အာပမုအနေနဲ့တော့ အော်မှားလို့.......ဥပမာ အနေနဲ့တော့.............လူတစ်ယောက်
အချစ်ဟာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ လို့ ထင်ပါတယ်...........
အချစ်ဆိုသည်မှာ.........တစ်ချို့လူတွေ ပြောနေကြတာပေါ့.........ဟုတ်လား မဟုတ်လားတော့မသိ........
ချစ်တာပေါ့လို့ပြောတယ် ..........ဘယ်လောက်ချစ်သလဲတဲ့...........ကောင်းကင်က ဓူဝံကြယ်ကိုတောင်........
သဲ စွတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တောင်.....ရအောင်ယူပေးမယ်တဲ့......ဒါ အချစ်မဟုတ်ပါဘူး........
သူ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ သာအဓိကပဲ ဆိုပြီး ပြောလိုက်တာ............နောက်တစ်ခု..........
ကောင်မလေးက မေးတယ်........အာဒံက ဧ၀ ကိုချစ်သလိုမျိုး ချစ်လားတဲ့...........
ကောင်လေးက ပြောတယ်.ချစ်တာပေါ့တဲ့.......အာဒံ တို့ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းလေးကို အကို အမများလည်း
ဖတ်ဖူးမှာ.........အားလုံးလည်း သိကြမှာလို့ထင်ပါတယ်..........အာဒံ ကရွေးစရာ လမ်းမှ မရှိတော့ပဲ...........
အဲသလိုမျိုး အချစ်ကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ ..... သေသေချာချာ စဉ်းစားပါ ............
ပြီးတော့မှ ပြောပါ ............. အဲဒါမှ ......... အချစ်လို့ခေါ်တယ် ...................
အချစ်ဆိုသည်မှာ ...............လူတစ်ယောက် မချစ်ခင်နဲ့ ချစ်မိသွားပြီဆိုိရင် အခြေအနေ မတူတော့ပါဘူး .........
မီးမထွန်းရသေးတဲ့ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ .......... မီးထွန်းထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ အတူတူပါပဲ.........
ဖယောင်းတိုင်က အစောကြီးကတည်းက ရှိပြီးသားပါ ..... ကောင်းလည်းကောင်းတယ် ........... ဒါပေမဲ့ .......
မီးထွန်းလိုက်တဲ့ ဖယောင်းတိုင်ဟာ မီးအလင်းရောင်တွေ ဖြာနေတယ် ........... ဖယောင်းတိုင် ရဲ့ .........
တစ်ကယ့်လုပ်ငန်းကတော့ မီးအလင်းရောင် ပေးဖို့ပါပဲ............. လို့ထင်ပါတယ် ..........
ညီမလေး ပုလဲ အကိုတော့ရေးလို့ ပြီးသွားပါပြီ ...........
စစ်ပေးပါဦးနော်........ အမှတ် ၁၀၀ ပေးရင် ကျွန်တော့်ကို ၃၀ လောက်တော့ပေးပါလို့ ပြောကြားရင်း
နိဂုံးချုပ် အပ်ပါသည် ..........
အကို အမ များ ကျွန်တော်ရေးတာကိုဝေဖန်ပေးပါလို့ လေးစားစွာ ပြောကြားအပ်ပါသည် ..........
အမှားများ ရှိရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ် .......... မသိ နားမလည်တဲ့ ကလေး မို့လို့ ခွင့်လွှတ်ပါလို့လဲ
ပြောကြားအပ်ပါသည် .............(သားသား ကို ခွင့်လွှတ် ပါနော်)
မဟုတ်တာတွေကို ရေးထားတာဆိုရင်လည်း ပြီးဆုံး အောင်ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .......
အားလုံးသော အကို အမ များ ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါလို့ ပြောကြားရင်း နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် ..........
ွှTAG ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေခဲ့ဖူးတဲ့ ဖြစ်သလို စားခြင်းကို ပြန်လည် တင်ပေးလိုက်တာပါ ..
သူငယ်ချင်းတွေက အခုတလော အရမ်းကို တက်နေကျတယ်.. ပူလို့နဲ့ တူပါရဲ့...စတာပါ
ပြန်ဖြေရတော့မှာပဲ .. ဖြစ်သလိုစားခြင်းကို...
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ဂျီးများတယ် ..ရေချိုးရမှာကြောက်လို့လေ..ဟိဟိ
စတာပါ တစ်နေ့ ၃ခါအနည်းဆုံး ရေချိုးတယ် ..သန့်ကြောင်း ကြုံတုန်းသိအောင် ပြောပြတာ..
မိဘအိမ်မှာနေတုန်းကတော့ ဂျီးများတယ် ..အစားအသောက်ရွေးတယ်ပေါ့
အသားဟင်းနဲ့ အရည်သောက်ပါမှစားတာ ..အသားဟင်းတောင် ၀က် ၊ ကြက် ၊
ဆိတ်သားမှ စားတာ .. မိုးသောက်လို့ ရောင်နီလာတာနဲ့ လက်ဖက်သုတ် ၊ တိုးဟူးသုတ် ၊
အကြော် ၊ ပဲပြုတ် တို့ပါမှ စားတာ.. ကျန်တဲ့ မုန့်တွေတော့ သိပ်မစားဖြစ်ဘူး
ထမင်း ၊ ဟင်းကိုပဲ အားပြုစားတယ် ( အားများနေလို့လေ )
အစာအိမ်ကလည်း သိပ်လက်သင့်မခံဘူးဗျ (တစ်နေ့ ၅နပ်လောက်ပါပဲ )
အဲလိုနဲ့ပဲ အိမ်နဲ့ကင်းကွာပြီး ကျောင်းတက်တာက စတော့တာပါပဲ
ဂျီးများတတ်တဲ့ ကျွန်တော်လေ .. ဆိုင် ထမင်း ဟင်း စစားတဲ့ အခါမှာပဲ စိတ်ညစ်ရတော့တယ်
ဗိုက်ကဆာပေမယ့် စိတ်က ဂျီးများတတ်တော့ စားလို့ သိပ်မ၀င်ဘူး..
မေမေ့စိတ်ကူးနဲ့ ချက်ထားတာလောက် စားမကောင်းဘူးဗျ .. မေမေ့လက်ရာက
အဲလောက်ထိကောင်းတာ ( အရိုက်ခံရလို့ ကျောမှာ အရာထင်လို့လေ )
မေမေ ချက်ကျွေးတဲ့ ထမင်း ဟင်းကို ကောင်းကြောင်းပြောနေတာ မေမေသာသိရင်
အိမ်ပြန်တဲ့အခါ သားအကြိုက်ဆိုပြီး အမယ်များစွာနဲ့ ချက်ကျွေးမှာ သေချာတယ် ..
ရေးရင်းနဲ့တောင် တမ်းတလို့ စားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်နေပြီ ..
တက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်တာကစပြီး ဂျီးများတဲ့စိတ်တွေ ပျောက်ကုန်တယ်..
ဇတ်လမ်းက စပြီလေ .. သူငယ်ချင်းတစ်အုပ်နဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေစီးပြီး ပျော်နေရရင်
ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ပဲ .. မရောက်ဖူးတဲ့ ဒေသတွေသွားလိုက် ဘုရားတွေ ဖူးလိုက်နဲ့
လမ်းမှာ ဗိုက်ဆာရင် ကြုံတဲ့ဆိုင် ၀င်ဆွဲလိုက်တာပဲ (ထမင်း ဟင်း စားတာပြောတာ )
ဒီလိုနဲ့ အိမ်ကတောင်းသုံးတာ များနေလို့ ချွေတာသုံးရင်း ပိုက်ဆံပြတ်ဖူးတယ်ဗျ
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ထမင်းကို ၆ ရက်လောက် မစားပဲ နေခဲ့ဖူးတယ်..
ကာတွန်း ၊ video တွေထဲမှာသာ စားစရာမရှိ ရေသောက် မှောက်အိပ်ဆိုတာကို
ရီခဲ့ဖူးတာ .. ကိုယ်တွေ့ကြုံမှပဲ ရီဖို့နေနေသာ ဆာတိုင်း ရေသောက်ဖို့ပဲ စဉ်းစားနေမိတော့တယ်..
နောက်ပိုင်း ဆိုင်ကယ် အလုပ်လေးလုပ်တော့ ပြန်သာယာလာတယ်ဆိုပါတော့
ဒါပေမယ့် အစားအသောက်ကို သိပ်မမက်တော့ဘူး ..ပိုက်ဆံရှိလည်း ထမင်းလေးတစ်ခဲ
မျိုကျသွားရင်ကို တင်းတိမ်သွားတယ်.. လျှောက်သွားရင်းတွေ့တဲ့နေရာ အဆာပြေရုံလောက်
လေး တစ်ခုခု စားရရင်ကို ဗိုက်က လက်သင့်ခံသွားပြီ ..အဲလိုနဲ့နေလာခဲ့တာ အခုလက်ရှိ
ထိဆို ၆ နှစ်ခွဲလောက်ရှိသွားပြီ .. အခုတစ်ယောက်ထဲနေတော့လည်း ထမင်း နှစ်နပ်တော့
ပုံမှန်စားတယ် ..ဟင်းက ဘာဟင်းပဲဖြစ်ဖြစ် စားတတ်နေပြီ ..
အော် .. ဒါနဲ့ တစ်ဆက်တည်း ပြောရဦးမယ် ..( ချစ်သူကတော့ ပျော်နေမှာပဲ ..
အစားအသောက် ဂျီးမများ ၊ စားတာနည်းတော့ အကုန်အကျသက်သာတယ်ဆိုပြီး ) ဟိဟိ
ကြွားတာ .. အခုဆို ပိုဆိုးတယ် .. ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်ရင် ထမင်းစားဖို့ မေ့မေ့သွားတယ်..
(အိမ်လည်ခေါ် ထမင်းကျွေးရင် သူငယ်ချင်းတို့ အဆင်ပြေမှာပါ)..လှည့်ပတ်စားချင်လို့ပါ
အကုန်အကျသက်သာအောင်လို့ ..ဟဟ ထမင်းတော့ ပိုချက်ထား..
အသက်တစ်နှစ်ကြီးလေ ပိုသိလာလေပဲ .. ဘယ်လောက်စားစား အာဟာရဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာ
အခုဆို ဘယ်နေရာ ဘယ်လိုအခြေနေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တော်တော်နဲ့ မစားပဲနဲ့လည်း နေနိုင်နေပြီ
တစ်ခါတစ်ခါ ထမင်းစားဖို့တောင် သတိထားနေရတယ် ..
ဘာကိုပဲစားစား အဆာပြေရုံလောက်လေးဆိုရင် ကျေနပ်နေပါပြီ
မိဘနဲ့ အဝေးမှာနေရတာ မနေချင်ပေမယ့် အစားအသောက် ဂျီးမများတတ်တော့တဲ့
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်တော့ အမွှန်းတင်နေမိပြီ ..
လက်ဆုံ စားပွဲဝိုင်းလေးဆီကို ..
ဘာမှ သိပ်မရေးတတ်တော့ ဒီလောက်လေးပဲ ရေးလိုက်တယ် သူငယ်ချင်းတို့
ကျွန်တော့်ကို tag ထားသော ညီမ megumi ၊ ညီမလေး ကင်း ( ချင်းမလေး )
တို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်နိုင်ပါစေနော် ..
7 Dec 2007 တုန်းက တင်ထားဖူးတဲ့ TAG ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အချစ်အကြောင်း ပြောပြဖို့ မေပျို က တက် (TAG) ထားတယ်လေ။ သူ့အကိုရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ကြားချင်ပုံ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းပါဘူး ညီမရယ်။ အချစ်အကြောင်း ရေးမယ်လို့ အပီအပြင် အားတင်းပြီး ညစ်ထုတ် ကြိုးစားပေမယ့်လည်း တစ်လုံးမှ ထွက်မလာဘူးလေ။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က အကို့ကို "Intellectual Robot" လို့ သမုတ်ဖူးတယ်။ အသိတရား ရှိတဲ့ စက်ရုပ်ပေါ့။ လူလို ကောင်းကောင်း မခံစား တတ်ဘူးတဲ့လေ။ ၅ တန်းကတည်းက ခင်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတော့ သူပြောတဲ့ စကားကို ငြင်းဖို့ အတော် ခက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟုတ်ပါတယ်လို့ ၀န်မခံခဲ့ဘူး။ ငါ ခံစားတတ်ပါတယ် လို့ပဲ ယုံကြည်ခဲ့တာလေ။ သူပြောတဲ့ စကားကို အတော်ကြာကြာ စဉ်းစားကြည့်မှ အတော်လေး မှန်နေတယ်။ ခံစားမှု အပိုင်းမှာ အတော်လေး အားနည်းနေတယ်။ `There is something beyond reasoning ´ တဲ့။ ဆင်ခြင်မှု နယ်မြေရဲ့ အပြင်မှာ အရာတချို့ ရှိတယ်တဲ့လေ။ ဒါကို အရင်က လက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူး။ Just feel it !! ဆိုတာကိုလည်း သိပ် ဘ၀င် မကျဘူး။ ဘယ်အရာ မဆို မှားခြင်းနဲ့ မှန်ခြင်းကို ဝေဖန် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှ ဘ၀ကြီးမှာ နေပျော်မယ်လို့ ထင်တာလေ။ ခံစားကြည့်ရုံနဲ့ အားလုံးဟာ စိုပြေနေမှာလား။ ဒီလို အတွေးတွေနဲ့ အကို့မှာ ချစ်ဖို့တောင် စဉ်းစားနေရတယ်လေ။
ငယ်ငယ်က တွေးတဲ့ အတွေးလေးတစ်ခု ရှိတယ်။ မှန်လား မမှန်လား စဉ်းစားသာ ကြည့်တော့လေ။ လောကမှာ ရှိတဲ့ သက်ရှိ သတ္တ၀ါတွေ အားလုံးက ခံစားချက် ဆိုတာကို အနည်းနဲ့ အများ နားလည်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လူဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါကမှ စဉ်းစား ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ အသိတရားနဲ့ နေတတ်ကြတာ။ ဒီလိုလေး တွေးပြီး ယုံကြည်ထားမိတော့ ဆင်ခြင်တတ်ဖို့က နံပါတ်တစ် ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ခံစားမှုတွေရဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေကို ခံလာရတဲ့အခါမှာ ဒါတွေဟာ ဆင်ခြင်နိုင်မှုရဲ့ ပြင်ပကို ရောက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ဆိုလိုတာက ခံစားမှုတစ်ခုကို စဉ်းစားပြီး ဖန်တီးလို့ မရသလိုပဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုကိုလည်း စဉ်းစားတတ်ရုံနဲ့ မဖယ်ရှားနိုင်ဘူး၊ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး ဆိုတာ သိခဲ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ တချို့ကိစ္စတွေမှာ Just feel it !! ဆိုသလိုပဲ စဉ်းစားကြည့် မနေတော့ဘဲ အရင် ခံစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်တယ်။ အဲဒီလိုမှ အချစ်ဆိုတာကို စတွေ့လာရတယ်။ ခံစားတတ်မှ ချစ်တတ်တယ် ဆိုတာကို အဲဒီတော့မှ နားလည်လာတယ်။ အခုအချိန်ထိ ဘာမှ အတိအကျ မသိသေးတော့ ကိုယ် ဖတ်ဖူးတဲ့ စာလေး တစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ပြီး အချစ်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဖတ်ချင်တယ် ဆိုရင် ဒီမှာ သွားကြည့်ပါ။ ဒီဘာသာပြန်လေးနဲ့ ကျေနပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ညီမလေးရေ ကျေနပ်နော်။
အချစ်ဆိုတာကို အတိအကျ မသိပဲနဲ့ `ငါ မင်းကို ချစ်တယ်´ လို့ ပြောနေကြတဲ့ လူတွေ အားလုံးအတွက် စဉ်းစားကြည့်ရအောင်လို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု နည်းနေလို့ပါ။
အချစ်ပါလို့ ဖြောင့်ချက်ပေးပြီး သူ့အနားမှာ မင်းနေပေးတာ သူ့ကို လုံးဝ မထိခိုက်စေချင်လို့ မဟုတ်လား။
သူ့ရဲ့ အကြည့်တစ်ချက်မှာ ရင်ခုန်သံ ရပ်တန့်မတတ် ဖြစ်သွားလို့ သူ့ကို ပုံအပ်လိုက်ချင်တာလား။
သူ့ကို သိပ် ဂရုစိုက်လို့ သူ့အပြစ်တွေကို ခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တာလား။
သူ့အတွက် ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့ အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ၀န်မလေးဘူး မဟုတ်လား။
တခြားသူတွေကို စွဲဆောင်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် သူ့ကိုပဲ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သစ္စာရှိရှိနဲ့ အတူ လက်တွဲနေသလား။
အခု အချစ်ဟာ သိပ် ခါးသီး နာကျင်နေစေမယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘာကြောင့် ချစ်ကြဦးမလဲ။
ဘာအတွက်ကြောင့် ဒါကြီးကို တစ်ဘ၀လုံး ရှာနေဦးမလဲ။
ကျနော်တို့ ဒါကို ဘာလုပ်ဖို့ တောင့်တနေဦးမလဲ။
ဒီအနာတရ၊ ဒီမချိမဆံ့ ဝေဒနာ၊ ဒီဒုက္ခတွေက ဘာကြောင့်လဲ။
ကိုယ့်ရဲ့ အတ္တကိုတောင် ဆန့်ကျင်ရဲတဲ့ သတ္တိနဲ့လေ။ အဲဒါ ဘာအတွက်လဲ။
အဖြေက သိပ်ရိုးရှင်းပါတယ်။ အဲဒါ အချစ်ကြောင့်လေ။
ဘယ်လောက်ထိ စွဲဆောင်အား ကောင်းသလဲဆိုရင် အချစ် မရှိဘူး ဆိုတဲ့လူတွေတောင် ခံစားကြည့်ချင်တယ်။ ရှိပြီးသား လူတွေက သူများကိုလည်း ခံစားစေချင်တယ်လေ။
အချစ်ဆိုတာ.....တဲ့...တူမလေးယောင်းယောင်း(dream ) ကတတ်ခ်ထားတာလဲကြာနေပြီး
တစ်ယောက်တစ်မျိုး စီနဲ့တော်လိုက်ကြတာနော်... မီးလေးမှာတော့ဘယ်လိုရေးရမှန်းမသိတာနဲ့
အဲ့လိုလေးသာရေးလိုက်လို့ကတော့ တူမတော်လေး ချက်ချင်းရောက်လာပြီး မပီကလာပီကလာ
လာပါပြီး မီးလေးအချစ် ဒသနလေး............
ကိုယ်ကစူးစူးနစ်နစ်မုန်းနေသူကိုလဲ... ပြန်ချစ်သွားတတ်သေးတယ်.. မိဘတွေကဘယ်လိုမှအထင်မကြီးသဘော
မတူနိုင်တဲ့သူကိုမှကိုယ်က အားကိုးပြီးမခွဲနိုင်မခွာရက် ချစ်မိနေတတ်တာမျိုးလဲ ဖြစ်တတ်တယ်......
ချစ်ဖူးတဲ့လူတိုင်းလိုလို ဖြစ်တတ်ကြတာကတော့ သူ့ကိုကိုယ်ကဘာကြောင့်ချစ်နေမိရတာလဲ.......
ဘယ်တုန်းကချစ်မိသွားတာလဲ...... ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ အဖြေမထွက်ပဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်.
သူ့ကိုပဲချစ်တယ်သူမှသူပဲလို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့မကြာသေးခင်းမှာ နောက်တစ်ယောက်ကိုရင်ခုန်မိပြန်တယ်...
ကိုယ်ကိုတိုင်ကလဲ.... သတ္တိကြောင်လို့.... ရှေ့ဆက်မဖြစ်နိုင်မှန်းသိလို့ လူကြားကောင်းအောင်..
ငါ့ကသူ့ကိုချစ်တာရယူလိုမှု့မဟုတ်ပါဘူး... ပေးဆပ်ခြင်းတွေနဲ့ချစ်နေရုံလေးပါဆိုပြီး.... ပြောကြတဲ့
ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့..... အင်း.....ဘယ်လိုပြောရမလဲ.... မရယူဖူးဘူးဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူးလေနော်... ဟဲ
ဲတူမလေးယောင်းယောင်းရေ ဒီလောက်နဲ့ပဲကျေနပ်လိုက်တော့နော် ဆက်မရေးတတ်တော့ဘူး.... ဟီးးး
စွန့်လွတ်အနစ်နာခံနိုင်တဲ့သူနဲ့.... ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူနှစ်ဦးမှာ ဘယ်သူကသူရဲကောင်းပိုဆန်လဲ...
ကိုရဲရင့်နီရဲ့ လွတ်မယ်ထင်ခဲ့သော်လည်း မလွတ်ခဲ့တဲ့ အချစ်ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါ
( ကျွန်တော်သိသော....အချစ်ဆိုသည်မှာ.... )
ဆိုတဲ့ တက်ဂ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ပို့စ်ရဲ့ပုံမှာ သူများနှုတ်ခမ်းပေါ် စာသွားရေးတဲ့အပြင် ? တောင်ပါလိုက်သေးတယ် :P ။ အဲဒီခေါင်းစဉ်က ခေါင်းသိပ်စားတယ်။ ရေးရမှာ စာလုံးအတော်ရှာရတယ်။ ထင်သလောက် သိသလောက် ခံစားတတ်သလောက် ရေးချလိုက်ပါ့မယ်ရှင်။
“ အချစ် ” ဆိုတာ သက်ရှိတိုင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ ခံစားချက်။
အချစ်က ပန်းဖြစ်ခဲ့ရင် သူက သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ပန်းဖြစ်မှာပါ။ မသေသောပန်းဆိုလည်း မှားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမြစ်ရှိတဲ့ပန်း၊ ရေမလို လေမလို၊ နေလဲမလိုဘူး။ မျိုးဆက်တွေအဆင့်ဆင့်ကို ထူးဆန်းစွာပွားတယ်။
လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်အစက မိခင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ အမှန်ကတော့ ပုစ္ဆာ္တတစ်ပုဒ်လိုပါပဲ။ ဥကအရင်လား အကောင်ကအရင်လား။( ဒီနေရာမှာရိုင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် ပုလဲ တောင်းပန်ပါတယ် )ဒါကတော့ တွေးလေ ရူးလေ ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲ။
ခုနကစာပြန်ဆက်ရမယ်နော်.. ကလေးတစ်ယောက် စစချင်းချစ်တတ်မှာ သူ့မိခင်ပေါ့။ ကလေးတစ်ယောက်ကလဲ အူဝဲအော်နေပေမယ့် သူ့မိခင်ကို ချစ်တတ်မှာပါ။ ဒါဘာကြောင့်လဲ။ သွေးကစကားပြောတယ် ဆိုတာမျိုးလား။ အဓိကအရင်းအမြစ်ကတော့ “ အချစ် ” ကြောင့်ပဲ ဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒါကြောင့် ပုလဲ အထင်ကတော့“ အချစ် ”ဟူသည် ဆရာမရှိတဲ့ပညာ၊ မသင်ပဲနဲ့တတ်တဲ့ ခံစားမှုတစ်ခုပါ။
“ အချစ် ” ဆိုတာ လူတွေရဲ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခု။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကံလို့လဲပုလဲထင်တယ်။ ပေါပေါလေးတွေးကြည့်မယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေအများကြီးပဲ။ လူတိုင်းနဲ့မတွေ့ မဆုံနိူင်သလို လူတိုင်းနဲ့လဲ ခင်မင်မှုမရှိနိူင် မချစ်နိူင်ဘူး။ ကိုယ်နဲ့သိတဲ့ လူတွေကြားမှာလဲ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုတော့ ခင်မင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုမှာပါ။( ပုလဲအနေနဲ့သာပြောတာပါ မှားခဲ့ရင်ထပ်မံတောင်းပန်ပါတယ် )အဲတော့
“ အချစ် ”ဟာ ကံရော မဖြစ်နိူင်ဘူးလား။ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ခင်မင်မှု၊ အချစ်ဆိုတာ ရေစက်လို့ပြောနိူင်မယ်။ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးအချစ်ဆိုရင်တော့ ဖူးစာပေါ့။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ “ အချစ် ”
ကြားဖူးပါတယ် အချစ်မှာ မျက်စိမရှိဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် အချစ်မှာ အသိတရားရှိတယ်လို့ ပုလဲထင်တယ်။ အချစ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသိတရားနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့ပြောရင် ပိုမှန်မလား။
ဥပမာပေါ့ - ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မလား။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်မလား။ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးနဲ့ တွက်မယ်ဆို ယောက်ျားလေးက မိန်းကလေးကိုချစ်၊ မိန်းကလေးက ယောက်ျားလေးကိုချစ်တာပဲ ဟုတ်ဘူးလား။
“ အချစ် ”ဆိုတာ ရုပ်ရည်၊ ပညာ၊ ဥစ္စာ စသည်ဖြင့်တွေနဲ့ မဆိုင်ဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် အချစ်ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲတွေကတော့ တစ်နည်းနည်းဖြင့် လောဘနဲ့ဆိုင်လာတတ်ကြတယ်။ အဲဒါက အချစ်နဲ့ ဘ၀ ဆက်သွယ်မှုရှိလာတဲ့ အချိန်မှာပေါ့။
“ အချစ် ” ဆိုတာ လောကကြီးကို ခြယ်တဲ့ဆေးရောင်တစ်ရောင်၊ သူမရှိရင်မလှဘူး။
“ အချစ် ” ကထူးဆန်းတယ်ဆိုရင် အမှန်ဆုံးဖြစ်နိူင်မလား။ သူသာ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် စာတွေ၊ ပုံတွေ၊ အရောင်တွေ၊ ဘာဆိုဘာမှ မရှိမယ့် စာရွက်အဖြူနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ပုလဲထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချစ်စာအုပ်ဟာ သူကိုယ်တိုင်ကြောင့်ပဲ အရောင်ပြောင်းသွားနိူင်တယ်။
“ အချစ် ” ဆိုတဲ့ ခံစားမှုနောက်မှာလိုက်တဲ့ အခြားခံစားမှုတွေ အများကြီးရှိတယ်လို့ ပုလဲထင်တယ်။ အဓိက ကတော့ ချစ်တတ်ရင် ချစ်မယ်၊ လောဘရှိလာမယ်၊ ပူဆွေးခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို တစ်ပြိုင်နက် ခံစားတတ်လာမယ်။ နောက်ထပ်တွေလဲ ရှိဦးမှာပါ။
၁၅၀၀ အချစ်က ပူလောင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အမှန်တော့ ၅၂၈လောက် အေးမြခြင်းတွေ မရှိနိူင်ရင်တောင် သူ့မှာလည်း အေးမြခြင်းတွေရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုတွေ နားလည်မှုတွေ ပေးနိူင်ရင် ၁၅၀၀ အချစ်ကလဲ အေးမြပါလိမ့်မယ်။ လူတစ်ယောက်က ၅၂၈ မေတ္တာနဲ့စတယ် ပြီးရင် ၁၅၀၀နဲ့တွေ့မယ် နောင်တော့ ၅၂၈မေတ္တာကို ၁၅၀၀မေတ္တာနဲ့ ပြန်မွေးဖွားရတယ်။ ပြီးဆုံးခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။
ဟဲဟဲ တော်ပြီနော်။ ပြီးတွားပြီ။ အတော်ခြစ်ကုတ်လိုက်ရတယ်။ ရေးထားတာတွေ အမှားပါရင် တောင်းပန်ပါတယ်။ လစ်ဟင်းမှု လိုအပ်ချက်များလဲရှိပါ၏။ ခွင့်လွှတ်တော်မူပါနော် :P ။ ကိုရဲရင့်နီ ရေးပြီးပြီ။ အဆင်ပြေပါစေနော်။ ကျေနပ်နော်။ ဖတ်ပေးသူများကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
အမှန်တော့ အချစ်ဆိုတာ အချစ်ပါပဲလေ။ ချစ်လို့ချစ်တာပေါ့နော်။
by Myat Lone
ဒါကတော့ ကျွန်တော် ပထမဆုံး ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ Tag Game Post လေး တစ်ခုပါ။ ဘလော့ဂါများ တက်ကုန်ကြပြီ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ဧပြီ၊ ၂၀၀၇ လောက်က ရေးခဲ့တာပါ။ ကိုတက်စလာဆိုတဲ့ လူကြီး အစပြုလိုက်တဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် ဒီတက်ဂိမ်းဆိုတာ မြန်မာဘလော့ဂါတွေအကြား ပျံ့နှံ့ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးလည်း မှတ်တမ်းပြုပါရစေခင်ဗျာ။ ပထမဆုံး Tag Game ရဲ့ ခေါင်းစဉ်က Ten Weird Things About Me ပါခင်ဗျား...။
ကိုအရုပ်ကလေးရေ .. ညီငယ် မီးတောက် ပြန်ဖြေလိုက်ပြီ...
အားလုံးကို လေးစားလျှက်ပါ.....ကျွန်တော် မီးတောက် ရဲ့ ရေးထားတာလေးကို ဖတ်ရှု့ကြပါလို့........
ကျွန်တော်သီးချင်းလေးလို ရေးထားပါတယ်........ကိုစောညီညီရဲ့သီချင်းကို ဖြတ်ပြီးရေးထားတာပါ.......
အဲ...ကျွန်တော် မီးတောက် စဉ်းစားရပြီလေ။ တစ်ခါမှလည်းမရေးဘူးလို့...သီချင်းလိုရေးမယ် ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ.......ကို့ ကို ကိုယ်မုန်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး........မကြိုက်တဲ့ အချက်ဆိုရင် (၁၀)ချက်မကဘူးလေ......မကရင် ဗုံထမ်းပြန်လို့တော့မပြောနဲ့နော်......ဟဲဟဲ.......နောက်တာပါ........
ကဲ......ရွာသားရေ....လိုရင်းကိုရောက်ဖ်ို့ အတိုရှင်းကာပြလိုက်ရင်ဖြင့်.......မီးတောက်ရဲ့ အမုန်းဆုံး(၁၀)ချက်က ဒီလိုလေးပါ......
မနက်တိုင်း ကောက်ညှင်းပေါင်း စားရတာကိုမုန်းတယ်.......
မိန်းကလေးတွေနဲ့တွေ့ရင် စကားမပြောတတ်တာကိုလည်း မုန်းတယ်.........
အခုထိ ရည်းစားမရှိသေးတာကိုလည်း မုန်းတယ်.........
သူငယ်ချင်းတွေက ယောင်္ကျားပဲ ယူလို့ပြောတာကိုလည်း မုန်းတယ်.........
ဒီသီချင်းကို ရေးတဲ့ ကိုစောညီညီ ကိုလည်းမုန်းတယ်...........
မီးတောက်ရဲ့ အမုန်းဆုံး(၁၀)ချက်လေးက ဒါပါပဲ ခင်ဗျာ............
တိုတိုလေးပေမယ့်လည်း ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပေးကြပါလို့.........အကို အမ များကို လေးစားစွာ ပြောချင်ပါတယ်
ခင်ဗျာ........နောက်ပိုစ့်တွေကြရင် ကောင်းအောင်ရေးပေးပါမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်...........
ကျော်ဟိန်း ရဲ့ အကြွေး ဇာတ်ကားလိုပေါ့… ၁၀ နှစ် ကြိုးစားလိုက်ရတယ်။
လောကမှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာကြရင် ချစ်လဲ ချစ်တတ်ကြမယ်။ မုန်းတတ်ကြမယ်။
အချစ်နဲ့ အမုန်းနဲ့ မကင်းတဲ့ သူဆိုတာ မရှိကြပါဘူး။သူများကို ချစ်တဲ့အချစ်နဲ့ အမုန်းသာ
စာဖွဲ့လို့မကုန်တာ …ကိုယ်ပါကိုယ် မုန်းတဲ့အမုန်းကြတော့ တော်တော့ကို ဆွဲထုတ်ရတယ်။
ထွက်လာတော့ လဲ အများကြီးဘဲ…မနဲ့ ရပ်ထားရတယ်…။ ညခင်း နဲ့ လမင်းကို အစ်ကို
အရုပ်ကလေးက တက်စ် ထားတာ ကြာပါပြီ။ ညခင်းဆို အကြွေးဆို လိုက်တောင်းတာ
ရေးပေးရေးပေးနဲ့…အဲလို… လိုက်မတောင်းတာ ကျေးဇူး။ဟဟဟ
(၁) သံယောဇဉ်ကြီးတတ်ခြင်း။ ( ဒီအားနဲချက်ကြောင့်သူများနှိပ်ကွပ်တာ အမြဲခံရ)
(၂) စွဲလမ်းတတ်ခြင်း၊ ( အင်တာနက်ကြီးကို တမျိုးမထင်လိုက်နဲ့ ဟီး)
(၃) လိုချင်တာကို မရမခြင်း ညအိပ်မပျော်တတ်ခြင်း။
(၄) သူများမျက်နှာ ညိုရင် မနေတတ်ခြင်း၊ (မုန်းဘို့ကောင်းတယ်...ငါကိုများ စိတ်ဆိုးနေလား)
(၅) ကိုယ်ခံစားချက်ထက် သူများ ခံစားချက်ကို ကြည့်ပေးတတ်ခြင်း။
(သူငယ်ချင်းများနှင့် အချိန်ကုန်ဆုံးမှန်းမသိ ကုန်ဆုံးနေတတ်ခြင်း)
(၆) အထွန့် တက်တတ်ခြင်း၊ (လူကြီးက ပြောလိုက်ရင် နဲနဲတော့ပြန်ပြောလိုက်ရမှ
(၇) စိတ်ဆိုးသင့်တာမျိုးကို မစိတ်မဆိုးဘဲ ခွင့်လွတ် တတ်၍၊ အသေးအဖွဲ ကိစ္စ
မျိုးမှာကျ မှ စိတ်ဆိုးတတ်ခြင်း၊
(၈) ပြောသင့်သည်ဟု ထင်လျှင် မည်သူမျက်နှာကို မှ မကြည့််… ဒုတ်ထိုး အိုးပေါက် ပြောတတ်ခြင်း။(တဘက်သားခံနိုင်မခံနိုင်…နောက်မှတွေးမိ)
(၉) မိန်းကလေး မဆန်ခြင်း၊ (အတွေးအခေါ်အယူအဆ၊ လက်တွေဆန်ခြင်း တွေက
ယောင်္ကျားလေး တစ်ယောက်နှင့် မခြား)
(၁၀) အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်ခြင်း၊ ပြုပြင်သင့်တာများကို ပြုပြင်ရမှာ ၀န်လေးတတ်ခြင်း။
အဲလို မုန်းဖို့ကောင်း ပါတယ်…ရှောင်ရှားကြပါကုန်…။
မက်မက် လေး ( ပုလဲကိုတီတီလို့ဦးဦးဖျားဖျားခေါ်ခဲ့တဲ့ အင်မတန်မှချောမောလှပ ချစ်စရာကောင်းပြီး လိမ္မာ အာဝါးပေး၍ချစ်တတ်သော ကော်ကော်ကြိုက်သော မိန်းကလေး ) ရဲ့တက်ဂ်ပို့စ်လေးပါ။ မက်မက်လေးရေ တီတီပယဲလို့ခေါ်လို့ တီတီပျော်တယ်ကွယ် အဟုတ်။ အကြောင်းအရာက အကြိုက်ဆုံးကဗျာလေးတဲ့။
- တစ်ကိုယ်တော် -
ရောဂါတစ်ခုရဲ့ နာမည်ကို ၀ယ်ယူပြီး
တစ်ခါ တစ်ခါ လဆန်းလိုက်
တစ်ခါ တစ်ခါ လဆုတ်လိုက်နဲ့
ဘယ်လို ခုတ်မောင်းရမယ်မှန်း မသိတော့ပြန်ဘူး။
“ချော်လဲရောထိုင် ကြေကွဲတတ်သူတွေ မလာရ”
ငါ တစ်ယောက်တည်း ချမယ်။
နာမည် ဘယ်လိုပေးရင် ကောင်းမလဲ ဆိုတာကိုပဲ
* မနိူင်းနိူင်းစနေဆီမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါကြိုက်တာလဲ မကြာသေးပါဘူး အကြိုက်ဆုံးကဗျာအနေနဲ့တင်လိုက်ပါတယ်
မက်မက်လေးရေ တီတီရေးပြီးပြီကွယ် ကျေနပ်ပါစေနော့်
အာာာာာာာာဝါးးးးးးးးးးးး x အတိုင်းအတာမရှိပါ :P
"ပထမတော့ လူတွေက အကျင့်ကိုလုပ်တယ် နောက်တော့ အကျင့်က လူတွေကိုပြန်လုပ်တယ်" တဲ့။
ဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်ထဲကပါ။ အဲလိုအကျင့်တွေထဲမှာ ကိုမကြိုက်တဲ့အကျင့်တွေလည်းပါနေပါတယ်။ မကြိုက်ပေမယ့်
ဖျောက်လို့မလွယ်တာက ခက်တယ်နော်။ အဲဒီမကြိုက်တဲ့အကျင့်တွေကို ကိုရန်အောင်က ၁၀ ချက်ပြည့်အောင်
ကဲ့ အမုန်းသင်ခန်းစာ စပါတော့မယ်
- တစ်ယောက်က်က အကူအညီတောင်းလာရင် ကို့ရဲ့ အခြေအနေကို ပြန်မကြည့်ပဲ အားနာပြီး အကူအညီပေးတတ်တဲ့
အကျင့်ကို မုန်းတယ်။ (အဲလို ခဏခဏကူညီနေလို့ ကောင်မလေးက သူ့ကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ကောက်တော့
- စာဖတ်တဲ့အချိန်မှာ အိပ်ငိုက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုလည်း မုန်းတယ်။( စာဖတ်တဲ့အချိန်မှာ အိပ်ငိုက်လို့
- တစ်ခါတစ်လေ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကိုမုန်းတယ်။ (အဲလို တဇွတ်ထိုးလုပ်မိလို့ ဖြေရှင်းလိုက်ရတဲ့
- ဟင်းမကောင်းရင် ထမင်းမစားချင်တဲ့ အကျင့်ကိုလည်း မုန်းမိတယ်။( ထမင်းမစားဘူး တစ်ခြားစားစရာတွေစားတယ်)
- အမြဲတမ်း ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကိုပဲ ဦးစားပေးနေရတဲ့ စိတ်ကို မုန်းတယ်။(မနက်ဖြန် တနလာင်္နေ့
အလုပ်မသွားချင်ဘူး ဒါပေမယ့် မသွားလို့မှမရတာ သွားရတာပဲလေ)
- တစ်ခုခုကို ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် တွေဝေတတ်တာကို မုန်းတယ်။ ( ဒီပိုစ့်ကိုတင်လိုက်တော့မယ်
မနက်ဖြန်မှတင်တော့မယ်လေ အခုတင်တာပိုကောင်းပါတယ် မနက်ဖြန်တင်ရင်လည်း မဆိုးပါဘူး)
- ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးတတ်တဲ့စိတ်ကိုမုန်းတယ်။ (အံမယ် ငါဆိုတဲ့ကောင်က အရမ်းတော်နေပါလား ကြည့်စမ်း
- လုပ်ရမယ့် အလုပ်တစ်ခုက အချိန်ရှိသေးတယ်ဆိုရင် နေ့ရွှေ့ညရွှေ့ လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကို မုန်းတယ်။(
အင်းမနက်ဖြန်တစ်ရက်ကျန်သေးတယ် မနက်ဖြန်မှ လုပ်လိုက်တော့မယ်)
- အမြဲတမ်း အစိုးရိမ်လွန်တတ်တဲ့ စိတ်ကို မုန်းတယ်။( အင်း ရမှရပါ့မလားနော် မရဘူးဆိုရင်တော့ ဒုက္ခပဲ)
- ယုံလွယ်၊ သနားလွယ်၊ မေ့လွယ်တဲ့ စိတ်တွေကို မုန်းတယ်။( အင်းလေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် သူ့ခင်ဗျာ သနားပါတယ်
အန်နေအုံး ငါ ဘာအကြောင်းတွေးနေပါလိမ့်)
ကဲ့ကိုရန်အောင်ရေ မုန်းလိုက်ပြီးဗျာ။ ကျနော်က ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် အရမ်းချစ်တာလေ ၁၀ ချက်ပြည့်အောင်
ဘလော့ဂါမောင်နှမများအားလုံး မုန်းခြင်းတရားတွေကင်းရှင်းစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ။
သူများကိုလည်း အပြစ်မတင်တတ်ခဲ့ဘူး (အကောင်းမြင်ဝါဒ)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အပြစ်မတင်တတ်ခဲ့ဘူး (အဆိုးမြင်ဝါဒ)
တစ်စုံတစ်ရာကိုလည်း အပြစ်မတင်တတ်ခဲ့ဘူး (နတ္ထိဝါဒ)
ဘ၀မှာတော့ နေတက် ထိုင်တတ်သွားခဲ့တယ်။
ဘ၀ကို လေတံခွန်လို အလိုက်သင့်လွှင့်တင်ရင်း
(ငွေ၊ လိင်ကိစ္စ၊ စဉ်းစားချိန် ၊အချစ် နဲ့ အလင်းရောင်)ကို
ကိုရင်ဝသန်ပေါ့... အကြိုက်ဆုံး ကဗျာတွေ ရေးပေးဆိုပြီး တက်ဂ်ထားတာလေ။ ခက်တာက မက်မက်က ကဗျာ ကောင်းမှန်ရင် အကုန်လုံးကို ကြိုက်နေတာ ခက်နေတယ်၊ အကုန်လုံး ရေးပေးလိုက်ရင် ဘလော့မှာ စာမျက်နှာ တော်တော် စားသွားမှာ..ဟိဟိ..တခုထဲနဲ့လည်း အားမရဘူး..ဒါကြောင့် သုံးပိုဒ်လောက် တင်ပေးလိုက်တယ်။ ကျေနပ်ပါတော့ ဦးအန်ထော်နီဝသန်(ခေါ်) ဦးခပ်ညံ့ညံ့ကောင်ရေ...အဲမှားလို့ ကိုရင်ဂျူဝသန်....ရေ.... (တခွက်လောက် :P ) မောလို့ :P
တက်စရာ ဘာလေးရေးရင် ကောင်းမလည်းလို့ လိုက်ရှာကြည့်လိုက်တော့ အလွယ်ဆုံးဟာလေး သွားတွေ့ပါတယ်…။ ကိုယ့်အကြောင်းတဲ့ အဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးပဲ။
ကိုယ့်ကို သူငယ်ချင်းတွေကဒီလိုခေါ်တယ် ————– ဆူးလင်း၊ သီရိ၊ ဆူး၊ ညီမလေး ၊ကြီးဒေါ်ကြီး
ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင် ———- အဟတ်အဟတ်မငြိမ်းလိုပဲလျှို့ဝှက်ချက်
အရောင်ဆိုရင် ———- စိတ်ပေါ်လာတာကြိုက်တယ်၊ မကြိုက်တာကလွဲရင်လေ
အ၀တ်အစားဆိုရင် ———- ပေါ့ ပါးပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတာမျိုး တစ်ခါတစ်လေကြိုက်တယ်
အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အ၀တ်အစားမျိုးလည်း တစ်ခါတစ်လေ ကြိုက်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်ကြီးဒေါ်လို့ ခေါ်ကြတာ…
အစားအစာဆိုရင် ———-အရေနဲ့ပြုတ်တွဲစားရတာမျိုးကြိုက်တယ်။ ကြေးအိုးတို့ မုန့်ဟင်းခါးတို့
ပစ္စည်းဆိုရင် ———- ကောင်းတာမှန်ရင်ကြိုက်တယ် ဈေးမကြီးရဘူး။ ဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းထက်လည်း ကောင်းစေချင်ပြန်ရော
သီချင်းဆိုရင် ———- ခံစားနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ ကိုက်တဲ့သူချင်းမျိုးတွေ ပျော်ရင်ပျော်သလို လွမ်းရင်လွမ်းသလို
စာရေးဆရာ ——— တန်ဖိုးရှိတဲ့စာ ရေးတဲ့သူမှန်သမျှ ကြိုက်တယ် ဆရာဖေမြင့်၊ ဂျူး၊ ရွှေဥဒေါင်း၊ ကောင်းသန့်
စာအုပ် ———– အမြည်းဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ ကြိုက်တဲ့ဟာ ကြိုက်တယ်…
Life style ———-လုပ်ချင်ရာလုပ်မယ်….
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ ———- စာအုပ်ဖတ်တယ်၊ စိတ်ပညာလေ့လာရတာကြိုက်တယ်…၊ ဟသကားကြည့်တယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်..
အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင် ———- နှင်းဆီပန်းအ၀ါတစ်ပွင့်
ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူက ———- ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထက်ပိုပြီးချစ်ဖို့ထိုက်တန်မဲ့သူမတွေ့
ကိုယ့်ရဲ့ အလေးစားဆုံးသူက ———- ဖေဖေနဲ့ မေမေ
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက ———-သီသီမော်၊ ညိုလေးဆွေ၊ နီလာအောင်၊တိုးတိုး၊သင်ဉ္ဇာသိန်း
ကိုယ့်ကို အများဆုံးနားလည်မှုပေးနိုင်သူက ———- မေမေ
ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆုံးသူက ———- မင်းယွန်းသစ်၊ ရှယ်လီဝင်း
အပျော်ဆုံးအချိန် ———- ရောက်မှာကြောက်တယ်… နောက်မပျော်ရမှာစိုးလို့
အမှတ်တရနေ့ ———- 21ရက်…. လတိုင်းရဲ့21
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်းမဲ့ဆု ———- စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါပါစေ
အချစ်ဆိုတာ ———- ရှာဖွေလို့ရတာ အချစ်မဟုတ် မချစ်တတ်ရင်ဓါးတစ်လက်တဲ့
အမုန်းဆိုတာ ———- သူ့အတိုင်းပဲထားတာကောင်းပါတယ်..
အလွမ်းဆိုတာ ———- ဒါပေါ့ ငြိမ်းပြောသလိုပဲ တစ်ခုခုကိုလိုနေတာ
ဘ၀ဆိုတာ ———- အတက်အကျရှိမှာပျော်ဖို့ကောင်းတာ
သူငယ်ချင်းဆိုတာ ———-အရာအားလုံးအတွက် သဘောအကျဆုံးသူတွေ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုထင်တယ် ———- ခပ်ချောချော …ကောင်မလေး :P အဟတ်အဟတ် ငြိမ်းနင်ပြောသလိုလိုက်ပြောတာနော်…း)
ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်က ———- ကိုယ့်မူကိုယ့်ဟန်အတိုင်းနေ…